अनिस तामाङ Archives - Lokpati.com
Tag - अनिस तामाङ
युएईमा डम्फू साँझ सम्पन्न, ख्यातिप्राप्त कलाकारको बेजोड प्रस्तुति
अनिस तामाङ/युएई । तामाङहरुको सांस्कृतिक चिनारी डम्फूको नामबाट डम्फू साँझ युएई परिवारले पहिलो ऐतिहासिक डम्फू साँझ–२०१९ बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ।
तामाङ समुदायको सांस्कृतिक पहिचानको रुपमा चिनिने...
एनआरएन • विकास/निर्माण
अनिस तामाङ/युएई। मार्च ३१ तारिख अर्थात् चैत्र १७ गतेदेखि हिमालय एयरलाइन्सले युएईको राजधानी अबुधाबीबाट काठमाडौंको सिधा उडान सुरु गरिएको छ।
एयरलाइन्सले आफ्नो उडान सुरु गरेको हिमालय एयरलाइन्सका जिएसए फिस्टेल ट्राभल्स एण्ड...
युएईमा डम्फू साँझ किन ?
डम्फू हरायो भने बिस्तारै तामाङ समुदायको संस्कृति पनि बिस्तारै हराउँदै जान्छ। तामाङ संस्कृति हराउनु देशको एक मौलिक संस्कृतिमा चुनौति निम्तनु हो, देशको संस्कृति लोप हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव खस–आर्य लगायतका सबै...
युएईमा पहिलो डम्फू साँझ हुँदै
अनिस तामाङ/युएई । तामाङहरुको सांस्कृतिक चिनारी डम्फूको नामबाट डम्फू साँझ युएई परिवारले पहिलो ऐतिहासिक डम्फू साँझ–२०१९ बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने तयारी तीब्र पारेको छ ।
तामाङ समुदायको सांस्कृतिक पहिचानको रुपमा...
अनिस तामाङ, २६ माघ । तामाङहरुको सामाजिक संस्था तामाङ समाज युएईले दुबईमा तामाङ संस्कृति जगेर्नाका लागि ‘तामाङ समाज युएईको शान तामाङ सांस्कृतिक तामाङ पहिचान’ भन्ने मुल नाराको साथ सोनाम ल्होछार २८५५ फाग ल्होको उपलक्ष्यमा सेलो...
सरकारका २ विकल्प : गियर बदल्ने कि ड्राइभर ! (बहस)
सोचेअनुरुप काम गर्न नसके पनि देशमा विकास नै नभएको भन्नु चाहिँ गलत हो । विकासका थुप्रै प्रयास भएका छन्, त्यसको नतिजा आउन समय त पक्कै लाग्छ । तर, यही गतिले समृद्धिको सपना सार्थक हुँदैन । तसर्थ, सरकारसँग २ विकल्प छन्, १. गियर बदल्ने, २...